သငျ့ကြားအင်ျဂါမှာ ပွသနာရှိနပွေီလား – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
သငျ့ကြားအင်ျဂါမှာ ပွသနာရှိနပွေီလား ?
သငျဟာ ကြားလိငျအင်ျဂါနဲ့မှေးဖှားလာသူတဈယောကျပါလား ? ဒါဆို သငျ့အနနေဲ့ သငျ့အင်ျဂါနဲ့ပတျသတျပွီး ကောငျးကောငျးသိထားသငျ့ပါပွီ ။
ကိုယျ့ကြားအင်ျဂါအရှယျအစားကို ပူပနျနခွေငျးထကျ အောကျဖျောပွပါ အခကျြငါးခကျြကို သတိပွုမှသာ သငျ့ကနျြးမာရေး စိတျခရြမှာဖွဈတဲ့အတှကျ ကွညျ့လိုကျကွရအောငျလား
၁။သငျ့ကြားလိငျအင်ျဂါဟာ ပုံမှနျထကျ ပိုမိုစောငျးနခွေငျး
သငျ့အနနေဲ့ လိငျအင်ျဂါတောငျမတျစဉျမှာ ပုံမှနျထကျစောငျးနတေယျလို့ ခံစားရရငျ လိငျတံအောကျမှာ မာကြောကြောအရာတဈခုခု ခုလုခုလုနဲ့ ခံစားနရေမယျဆို သငျ့အနနေဲ့ Peyronie’s disease လို့ချေါတဲ့ အမာရှတျတဈရှူးမြားကွောငျ့ဖွဈသောရောဂါ ဖွဈနိုငျပါတယျ ။
မကုသဘဲထားပါက လိငျဆကျဆံရာတှငျ နာကငျြခွငျးကိုဖွဈစနေိုငျပွီး လိငျအင်ျဂါကြိုးပဲ့ခွငျး အထိ ဖွဈစနေိုငျပါတယျ ။
၂။ ကပ်ပအိတျအတှငျး အလုံးအကွိတျမြား စမျးမိခွငျး
ဒါဟာ ဝှေးစကေ့ငျဆာ လက်ခဏာဖွဈနိုငျပါတယျ ။
စောစောစီးစီးသိရှိပွီး ကုသခဲ့လြှငျ ပြောကျကငျးနိုငျသညျ့အတှကျ ပုံမှနျစဈဆေးဖို့တော့လိုပါလိမျ့မယျ ။
အဖွူရောငျအစကျအပြောကျလေးတှေ တှရှေိ့ပွီဆိုပါက သငျ့အနနေဲ့ lichen sclerosus လို့ချေါတဲ့အရပွေားအခွအေနတေဈခုဖွဈနိုငျပွီး ဒါဟာ ဟျောမုနျးသို့မဟုတျ ကိုယျခံအားစနဈ ခြို့ယှငျးမှုကွောငျ့ဖွဈစနေိုငျပါတယျ ။
ဒါကို လိငျအင်ျဂါအရပွေား ထိပျမဖွတျထားတဲ့အမြိုးသားတှေ ဒါမှမဟုတျ ဆီးသှားတဲ့အခါ တဈခုခုခံနတေယျလို့ ခံစားရတဲ့သူတှမှောစိုးရိမျရပါတယျ ။ မကုသဘဲထားပါက ကငျဆာဖွဈပှားနိုငျခွငျး ဆီးလမျးကွောငျးပိတျဆို့ခွငျးတို့အထိဖွဈစနေိုငျပါတယျ ။
ဒါဟာ ဆီးကြိတျကွီးခွငျး ကြောကျကပျကြောကျတညျခွငျး လက်ခဏာတှေ ဖွဈနိုငျပါတယျ ။ ဆီးရောငျဟာ ပနျးရောငျဖြော့တော့တော့ဖွဈနိုငျသလို ကိုလာရောငျကဲ့သို့လဲ မညျးနကျနနေိုငျပါတယျ ။ ဆီးပိုးဝငျခွငျး ၊ ကြောကျကပျပိုးဝငျခွငျး ဆီးကြောကျတညျခွငျး ၊ ကငျဆာ ၊ ဆေးဝါးမြားကွောငျ့ဖွဈနိုငျပါတယျ ။
၅။ ဆီးသှားစဉျ နာကငျြခွငျး
ဒါဟာ ဆီးထဲ ပိုးဝငျခွငျး ၊ ဆီးလမျးကွောငျး ကဉျြးမွောငျးခွငျး ၊ ဆီးလမျးကွောငျးယောငျခွငျး ၊ လိငျမှတဆငျ့ကူးကျသော ရောဂါမြားဖွဈသညျ့ ဂနိုရောဂါဖွဈခွငျး အစရှိသညျတို့ဖွဈနိုငျပါတယျ ။
ဒါကွောငျ့အမြိုးသားမြားအနဖွေငျ့အထကျပါလက်ခဏာမြား ကွုံတှရေ့ပါက ပေါ့ဆစှာ မနသေငျ့ပဲ ဆရာဝနျနှငျ့ပွသတိုငျပငျကုသသငျ့ပါတယျ ။
သင့်ကျားအင်္ဂါမှာ ပြသနာရှိနေပြီလား ?
သင်ဟာ ကျားလိင်အင်္ဂါနဲ့မွေးဖွားလာသူတစ်ယောက်ပါလား ? ဒါဆို သင့်အနေနဲ့ သင့်အင်္ဂါနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကောင်းကောင်းသိထားသင့်ပါပြီ ။
ကိုယ့်ကျားအင်္ဂါအရွယ်အစားကို ပူပန်နေခြင်းထက် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်ငါးချက်ကို သတိပြုမှသာ သင့်ကျန်းမာရေး စိတ်ချရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကြည့်လိုက်ကြရအောင်လား
၁။သင့်ကျားလိင်အင်္ဂါဟာ ပုံမှန်ထက် ပိုမိုစောင်းနေခြင်း
သင့်အနေနဲ့ လိင်အင်္ဂါတောင်မတ်စဉ်မှာ ပုံမှန်ထက်စောင်းနေတယ်လို့ ခံစားရရင် လိင်တံအောက်မှာ မာကျောကျောအရာတစ်ခုခု ခုလုခုလုနဲ့ ခံစားနေရမယ်ဆို သင့်အနေနဲ့ Peyronie’s disease လို့ခေါ်တဲ့ အမာရွတ်တစ်ရှူးများကြောင့်ဖြစ်သောရောဂါ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
မကုသဘဲထားပါက လိင်ဆက်ဆံရာတွင် နာကျင်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပြီး လိင်အင်္ဂါကျိုးပဲ့ခြင်း အထိ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် ။
၂။ ကပ္ပအိတ်အတွင်း အလုံးအကြိတ်များ စမ်းမိခြင်း
ဒါဟာ ဝှေးစေ့ကင်ဆာ လက္ခဏာဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
စောစောစီးစီးသိရှိပြီး ကုသခဲ့လျှင် ပျောက်ကင်းနိုင်သည့်အတွက် ပုံမှန်စစ်ဆေးဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ် ။
အဖြူရောင်အစက်အပျောက်လေးတွေ တွေ့ရှိပြီဆိုပါက သင့်အနေနဲ့ lichen sclerosus လို့ခေါ်တဲ့အရေပြားအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပြီး ဒါဟာ ဟော်မုန်းသို့မဟုတ် ကိုယ်ခံအားစနစ် ချို့ယွင်းမှုကြောင့်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် ။
ဒါကို လိင်အင်္ဂါအရေပြား ထိပ်မဖြတ်ထားတဲ့အမျိုးသားတွေ ဒါမှမဟုတ် ဆီးသွားတဲ့အခါ တစ်ခုခုခံနေတယ်လို့ ခံစားရတဲ့သူတွေမှာစိုးရိမ်ရပါတယ် ။ မကုသဘဲထားပါက ကင်ဆာဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်း ဆီးလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ခြင်းတို့အထိဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် ။
ဒါဟာ ဆီးကျိတ်ကြီးခြင်း ကျောက်ကပ်ကျောက်တည်ခြင်း လက္ခဏာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ ဆီးရောင်ဟာ ပန်းရောင်ဖျော့တော့တော့ဖြစ်နိုင်သလို ကိုလာရောင်ကဲ့သို့လဲ မည်းနက်နေနိုင်ပါတယ် ။ ဆီးပိုးဝင်ခြင်း ၊ ကျောက်ကပ်ပိုးဝင်ခြင်း ဆီးကျောက်တည်ခြင်း ၊ ကင်ဆာ ၊ ဆေးဝါးများကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
၅။ ဆီးသွားစဉ် နာကျင်ခြင်း
ဒါဟာ ဆီးထဲ ပိုးဝင်ခြင်း ၊ ဆီးလမ်းကြောင်း ကျဉ်းမြောင်းခြင်း ၊ ဆီးလမ်းကြောင်းယောင်ခြင်း ၊ လိင်မှတဆင့်ကူးက်သော ရောဂါများဖြစ်သည့် ဂနိုရောဂါဖြစ်ခြင်း အစရှိသည်တို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
ဒါကြောင့်အမျိုးသားများအနေဖြင့်အထက်ပါလက္ခဏာများ ကြုံတွေ့ရပါက ပေါ့ဆစွာ မနေသင့်ပဲ ဆရာဝန်နှင့်ပြသတိုင်ပင်ကုသသင့်ပါတယ် ။